ထူးဆန်းသောအလယ်အလတ်တန်းစား HTC ကိရိယာသည် AnTuTu မှဖြတ်သန်းသွားသည် Androidsis
ထိုင်ဝမ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ HTC သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလှပသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခဲ့သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီမှရုန်းကန်နေရသည် နှောင်းပိုင်းတွင်အဖြစ်ဖော့နေဖို့။ ငါတို့မြင်ပြီ ပစ်လွှတ်မှုနှုန်း.
ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဖုန်းဖြစ်သည် Desire 12s, ယခုဒီဇင်ဘာလ 2018. ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, HTC မော်ဒယ်သစ်လာပြီ, နှင့်၎င်းသည် AnTuTu's Weibo စာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသည့်ပုံစံနှင့်တူသည်။ အချို့သော specs များနှင့်မော်ဒယ်၏အခြေခံစံနှုန်းကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကိုအခြေခံစံနှုန်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲကြည့်ရအောင်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမည်မဲ့သော HTC ကိရိယာကို "HTC 2Q7A100" အဖြစ်စာရင်းပြုပြီး၊ Snapdragon 710 chipset အရာ Adreno 616 GPU ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှရမှတ် ၁၆၉၆၁၇ မှတ်ရရှိခဲ့သည်, အခြား Snapdragon 710 တပ်ဆင်ထားသောမော်ဒယ်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းသော HTC အလယ်အလတ်တန်းစား AnTuTu တွင်စာရင်း
terminal တွင် RAM6GB နှင့် Internal Storage 128 GB ပါဝင်သည်။ ဒီတစ်ခုအပြင်အခြားမှတ်ဉာဏ်မျိုးကွဲရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း 2Q7A100 တွင် FHD + Resolution 2,160 × 1,080 Pixels ရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အပေါ်ကို run ဖို့စာရင်းဖြစ်ပါတယ် အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie၊ HTC Sense UI ၏ထိတွေ့မှုရှိရမည်။
ဒါက Desire စီးရီးရဲ့နောက်မျိုးဆက်မော်ဒယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။မကြာသေးမီကထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်စီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Snapdragon 710 မော်ဒယ်များသည်လက်ရှိတွင်စျေးကြီးလွန်းခြင်းမရှိသော်လည်း HTC သည်စျေးနှုန်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာမကောင်းဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာသည်လူအများစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်ရန်အရောင်အသွေးစုံလင်သောရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများဖြင့်စတင်ရန်အလွန်မကောင်းပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » HTC သည်နမူနာနမူနာများကို ပေး၍ AnTuTu တွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်လ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်
Skype ကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏မျက်နှာပြင်ကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်
Pocket Cowboys တွင်ရွေ့လျားခြင်း၊ ပြန်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိုက်ကူးခြင်း၊